Sidee ka bixitaanka Midowga Yurub u galaaftay Theresa May? | Goojacade
Home War Sidee ka bixitaanka Midowga Yurub u galaaftay Theresa May?
Ra’iisal wasaarahii labaad ee haweenay ah dalka Britain, sidii haweenaydii ka horraysay, ayaa ugu danbeyntii waxaa galaaftay dagaalka muxaafidku la gelayaan Yurub.
Ujeedka kasta oo ay rabtey, oo uu ka mid ahaa inay gaadho qaybaha la illoobay ee dalkaasi ama wax ka qabato “caddaalad darrada gubaysa” bulshada reer Britain, waxaa dhammaantood galaafatay kelmad keliyaata taas oo ah “Brexit”.
Ku dhawaad saddexdii sano ee ay xafiiska joogtay, waxaa guud ahaan lagu qeexay go’aankii Ingiriisku ku doonayey inuu ka go’ midowga yurub iyo dedaalladii murugada lahaa ee ku aaddanaa si u ay u gaadho afti loo qaado.
Markii ay ku dhawaaqday go’aankeeda ah in ay ka tagto hoggaamiyaha xisbiga muxaafadka iyo Ra’iisul Wasaarahaha, ayaa codkeedii gaabtay waxayna noqotay mid dareenku ka tanbadiyey
Waxay si rasmi ah u sii wadi doontaa illaa iyo 7-da Juun, iyada oo jidka u sii xaadhaysa tartanka xisbiga muxaafadku kaga go’aan gaadhayaan raysalwasaaraha cusub ee xigi doona.
• Taariikhda dhalashada: 1 Oktoober 1956 (da’da 62)
• Waxbarashada: badankeeda waxay ka baxday dugsiya dawladda ,dugsiga Hoose ee Wheatley Park, wakhti gaaban oo ay ka baxday dugsi madaxbannaan ,St Hugh’s College, Oxford.
• Hiwaayaddeeda: Cunto karinta – waxayna sheegtay in ay haysato in ka badan 150 buug oo ku saabsan sida wax loo kariyo. Fasaxyadeeda waxay aaddaa buuraha iyada iyo odaygeeda.
Previous articleDarawal Shiineys ah oo lagu ganaaxay isagoo wejiga xoqanaya
Next articleDonald Trump oo fasaxay in hub balaayiin doolar ah laga iibiyo Sucuudiga